အဘယ်ကြောင့်အော်ပရာအတွက် PLAYER ကိုလျှပ်တပြက်ပါဘူး - တေးသံစုံကဇါတ် - 2019
Instagram ကို - ပဲဓါတ်ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုမျှဝေများအတွက်လူမှုကွန်ယက်, ဒါပေမယ့်လည်းငွေရှာများအတွက်ထိရောက်သောပလက်ဖောင်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဒီနေ့ပေးထားသောလူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုအတွက်ဝင်ငွေကို generate ဖို့အဓိကနည်းလမ်းမှာကြည့်ပါ။
ဒါဟာ Instagram ကိုအပေါ်လူကြိုက်များ profile များကိုကောင်းသောငွေရှာမလျှို့ဝှက်ချက်ပါပဲ။ ဒါကြောင့်အချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှုတွေအများကြီးသုံးစွဲထားပြီးဖြစ်သောကြောင့်၏သင်တန်း, ကြီးကြီးလစာသူသည်တစ်ချိန်ကမပေးထားခဲ့သည်။ ယနေ့ဝင်ငွေရရှိမှု Instagram ကိုအတွက်ရွေးချယ်စရာတစ်ခုမျှမျှတတကျယ်ပြန့်ရှိပါတယ်, သင်သည်လည်းအသင့်တော်ဆုံးရွေးချယ်ဖို့လိုပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ Instagram ကိုများအတွက်ရုံတက်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့ကြပါပြီဆိုပါစို့။ သငျသညျစဉ်းစားရန်လိုအပ်သည့်ပထမဦးဆုံးအရာကဘာလဲ? သင်တန်း၏, subscriber များအားစုဆောင်းရန်မည်သို့မည်ပုံပေါ်မှာ။ အသစ်သောအသုံးပြုသူများကိုသင့်စာမျက်နှာကိုဆွဲဆောင်ဖို့, သင်သည်သင်၏ပရိသတ်ကို၏အရွယ်အစားအားဖြင့်ဆုပျရှံ, Instagram ကိုအတွက်လက်ရှိဝင်ငွေထုတ်လုပ်နီးပါးအားလုံးနည်းလမ်းများကြောင့်၎င်း, မြှင့်တင်ရေးအတွက်ထိုသို့ပြုရကြမည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Instagram ကိုတစ်ဦးပရိုဖိုင်းကိုမြှင့်တင်ဖို့ကိုဘယ်လို
Method ကို 1: ယင်း၏န်ဆောင်မှုများရောင်းချခြင်း
အတော်များများကအသုံးပြုသူများက Instagram ကိုတဆင့်သူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုဖြစ်ပါတယ်ကမ်းလှမ်း, စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေကြသည်။
ထိုသို့မြှင့်တင်ရေးအဘို့ကြီးစွာသောပလက်ဖောင်းရဲ့ - Instagram ကိုနေချိန်မှာ, သင့်အလွတ်တန်းန်ဆောင်မှုများ, ထုတ်ကုန်, etc - သင်ပူဇော်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါက။ ဒါကြောင့်ကြော်ငြာတာဝန်ထမ်းဆောင်ရဲ့ - ကိုယ့်ကိုကိုယ်အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကိုပြောပြရန်အလွယ်ကူဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: Instagram ကိုအပေါ်ကို advertise လုပ်နည်း
Method ကို 2: ကြော်ငြာဝင်ငွေ
သင့်အကောင့် 10000 သို့မဟုတ်ထိုထက်ပို "တိုက်ရိုက်" subscriber များအားရှိပါတယ် အကယ်. သင့်ရဲ့ကံကြိုးစားကြော်ငြာရှင်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထည့်သွင်းရန်ကြိုးစားနိုင်သည် - ကကြော်ငြာတဲ့အထူးလဲလှယ်တက်ယူ Instagram ကို၎င်း၏ပရိုဖိုင်း၏အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်နှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုဖွင့်လှစ်, ပြီးတော့ဖြစ်စေလွတ်လပ်စွာသူတို့၏ "ကိုယ်ရေးရာဇဝင်" ပို့ပေးပါလိမ့်မယ် ကိုယ့်ကြော်ငြာရှင်များ, သို့မဟုတ်သင်ဆက်သွယ်ပါလိမ့်မည်သည်အထိစောင့်ပါ။
ရှာဖွေရေးကြော်ငြာများအတွက်လူကြိုက်အများဆုံးဖလှယ်မှုများထဲတွင် Adstamer, Sociate နှင့် Plibber ခွဲခြားနိုင်ပါတယ်။
ယနေ့တွင်ကြော်ငြာပေါ်လုနီးပါးဆိုပိုပြီးဒါမှမဟုတ်ဒီထက်အောင်မြင်သောရဲ့ login စေသည်, ကြော်ငြာ၏ကုန်ကျစရိတ်သည်သင်၏ subscriber များအား၏နံပါတ်အပေါ်အလွန်အမင်းမှီခိုသည်။
Method ကို 3: အကြိုက်နဲ့မှတ်ချက်တွေကနေဝင်ငွေ
Instagram ကိုအတွက်လျော့နည်းငွေသား option ကိုဝင်ငွေရရှိမှု, သို့သော်, သင်တဲ့ subscribers ၏ကြီးမားသောအရေအတွက်ရှိသည်, သင်မယ့်နေတဲ့ပရိုဖိုင်း၏မြှင့်တင်ရေးအတွက်ထိတွေ့ဆက်ဆံဘူးသောအဖြစ်အပျက်အတွက်စုံလင်သည်။
အောက်ခြေလိုင်း, သင်သည်လိုပဲခွင့်လိုအပ်ခွငျးတညျးဟူသော, အမိန့်ရှာနေ start မှတ်ချက်ပေးရန်, ဒါမှမဟုတ် Instagram ကိုတစ်ဦး repost စေရှိရာအထူးက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင် register သောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
ဒီနည်းလမ်းကိုမှအခွန်ကိုအချိန်နှင့်ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏ပမာဏကိုပေးဆောင်, သငျသညျ 500 ရူဘယ်တစ်နေ့ဝင်ငွေနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်အချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှ, ထိုင်ငွေတိုးပွားလာကဒီမှာမစောင့်သင့်ပါတယ်။ ထိုကဲ့သို့သောဖလှယ်မှုများထဲတွင်ပုံမှန်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် QComment VKTarget နိုင်ပါတယ်။
Method ကို 4: ပုံရောင်းချ
Instagram ကိုကတည်းက - ပုံရိပ်တွေ၏ထုတ်ဝေရည်ရွယ်တစ်လူမှုကွန်ရက်ဝန်ဆောင်မှုဗွေဆော်ပထမနှင့်ဖြစ်ပါသည်ဓာတ်ပုံဆရာနှင့်၎င်းတို့၏ဖောက်သည်များကိုရှာဖွေနိုင်ခဲ့ပါတယ်ရှိရာ, သို့ဖြစ်လျှင်ဤဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျဓာတ်ပုံတွင်ပါဝင်ပတ်သက်နေတယ်ဆိုရင် Instagram ကို၎င်းတို့၏ဓာတ်ပုံများထုတ်ဝြေခင်းများနှင့်တက်ကြွစွာပရိုဖိုင်းကိုမြှင့်တင်ရန်သည်, သင်သည်သင်၏အလုပ်ဆည်းပူးဖို့ဆန္ဒရှိနေသောဖောက်သည်ရှာတွေ့နိုင်ပါလိမ့်မည်။ ဟုတ်ပါတယ်, ဝင်ငွေ၏ဤနည်းလမ်းကိုသုံးစွဲဖို့, သင်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဓာတ်ပုံကိုပစ္စည်းကိရိယာများအဘို့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏တစ်ကယ့်ကိုအရည်အသွေးမြင့်အမှုတော်တို့ကိုရှိရမည်။
Method ကို 5: Affiliate အစီအစဉ်များအတွက်ပါဝင်ဆောင်ရွက်
နှစ်ဦးစလုံးရာထူးတိုးအကောင့်အသစ်များ၏သုံးစွဲသူများနှင့်ကြီးမားသောပရိသတ်ကိုဝါကြွားမနိုင်သောသူတို့အဘို့သင့်လျော်သည်ဖြစ်သော Instagram အတွက်ဝင်ငွေကို generate ရန်နောက်ထပ်နည်းလမ်းဖြစ်သည်။
အောက်ခြေလိုင်းသင် site ပေါ်တွင်မှတ်ပုံတင်နေကြတယ်, သငျသညျမိမိအ Instagram ကိုတည်ရှိသောသောအထူး link ကိုရပါလိမ့်မယ်ဆိုတာပါပဲ။ ဒီ link ကိုနှိပ်ခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့စာရင်းပေးသွင်းထားသူရှိလျှင်, ကုန်ပစ္စည်းသို့မဟုတ်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဝယ်ယူပါစေ, သငျသညျ (ရာခိုင်နှုန်းခြမ်းပိုမိုမြင့်မားသို့မဟုတ်အောက်ပိုင်းတစ်ခုခုကိုကွဲပြားစေခြင်းငှါ) တန်ဖိုးအနေဖြင့်ဝင်ငွေနှင့် ပတ်သက်. 30% ရပါတယ်။
သင် Affiliate အစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင်အောက်ပါအတိုင်းအတိုင်း, သင်တို့၏လုပ်ရပ်များ၏အမိန့်ရှိလိမ့်မည်:
တစ်ဦး Affiliate Program ကိုကမ်းလှမ်းသော site ကိုအပေါ် Register ။ အဆိုပါ site ၏တိကျသောအကျိုးစီးပွားဥပမာ, Aviasales နှင့် Affiliate အစီအစဉ်များအထူး directory ထဲတွင်ဥပမာ, ActualTraffic နှင့် AllPP အပေါ်နှစ်ဦးစလုံး "Affiliate" သင်နိုင်ရှာပါ။
သငျသညျမှတျပုံတငျတဲ့အခါမှာသင်ငွေသားအကြာတွင်လာလတံ့သောအဘို့ငွေပေးချေမှုစနစ်အား Webmoney, Qiwi, PayPal ကသို့မဟုတ် Yandex.Money မှပိုက်ဆံအိတ်သတ်မှတ်, စည်းကမ်းအဖြစ်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျထူးခြားတဲ့ link ကိုရယူပါ။
တက်ကြွစွာ Instagram ကိုဖို့ link ကိုဖြန့်ဝေ။ ဥပမာအားဖြင့်, သင်တစ်ဦးရဲ့အရည်အသွေးဖြားယောင်းစာသားကိုအတူ post ကိုကြော်ငြာသင့်ရဲ့စာမျက်နှာပေါ်တွင်နေရာချနိုင်, link တစ်ခုပူးတွဲရန်မေ့လျော့ကြပါဘူး။
အသုံးပြုသူရိုးရှင်းစွာသင့်ရဲ့ link ကိုတဆင့်သွားလိုလျှင်, သင်အနည်းငယ်မိတ်ဖက်ငွေပေးချေမှုရလေ့ရှိပါတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးတစ်ဦးကိုဝယ်ယူပါစေသောဖြစ်ရပ်၌, သင်ရောင်းတစ်သတ်မှတ်ထားတဲ့ရာခိုင်နှုန်းကိုသွားပါလိမ့်မယ်။
သငျသညျ Affiliate အစီအစဉ်များပါဝင်ရောက်လာပြီဆိုပါကတစ်ချိန်တည်းမှာပင်, ငါတို့သည် Instagram ကိုကန့်သတ်ထားခြင်းကိုမရန်သေချာဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, အခြားလူမှုရေးကွန်ယက် post ကိုလင့်များ။
Method ကို 6: ပရိုဖိုင်းကို Instagram ကိုအလုပ်လုပ်
ယနေ့တွင် Instagram ကိုအပေါ်လူကြိုက်များ profile များကိုမကြာခဏတဦးတည်းအသုံးပြုသူဖြည့်ညှင်း၏မြှင့်တင်ရေးနှင့်မဖြစ်နိုင်သလောက်ထဲမှာထိတွေ့ဆက်ဆံ, သင့်အကောင့်လှုပ်ရှားမှုကိုဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားဖို့အဖြစ်အနည်းငယ်လူတွေကဆောင်ရွက်ပါသည်။
ဥပမာ, ပရိုဖိုင်ထဲမှာအကြောင်းအရာ၏ဖန်တီးမှုအတွက်စေ့စပ်လိမ့်မည်သူကို Instagram ကို-မန်နေဂျာ, ဒီဇိုင်းကိုပရိုဖိုင်းကို, မှတ်ချက်များနှင့်မြှင့်တင်ရေး၏မလိုအပ်တဲ့အဖြစ်အမျိုးမျိုးသောနည်းလမ်းများ၏ဖယ်ရှားရေးစောင့်ကြည့်လိုအပ်နိုင်ပါသည်။
အလားတူအဆိုပြုချက်ဟာ Instagram ကို (လိုအပ်သောဝန်ထမ်းအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်အဓိကပရိုဖိုင်းစာမျက်နှာပေါ်တွင်သို့မဟုတ်တိုင်တတည်ရှိသောနိုင်ပါတယ်), အုပ်စု VKontakte သို့မဟုတ် Facebook နှင့်အမျိုးမျိုးသောအလွတ်တန်းဖလှယ်မှု (uJobs စသည်တို့ကို FL.ru, Kwork) တွင်ရှိနိုင်ပါသည် Find ။
သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်သတ်သတ်မှတ်မှတ် profile များကိုအပေါ်၎င်းတို့၏ဝန်ဆောင်မှုများကိုပူဇော်ဖို့အခမဲ့ခံစားရ - အရောင်းစာမျက်နှာပေါ်မှာဤရည်ရွယ်ချက်အဘို့, သင်ကျိန်းသေခလုတ်ကိုမြင်ရပါလိမ့်မည် "ဆက်သွယ်ပါ"တစ်ဦးဖုန်းနံပါတ်သို့မဟုတ်အီးမေးလ်လိပ်စာကိုပြပေးလိမ့်မယ်အရာပေါ်နှိပ်။
ဤရွေ့ကား Instagram ကိုအတွက်ဝင်ငွေရရှိမှု၏အဓိကနည်းလမ်းများဖြစ်ကြသည်။ သင်အမှန်တကယ် Instagram ကိုအပေါ်ဝင်ငွေကိုစတင်ရန်ထွက်သတ်မှတ်လျှင်သင်သည်သင်၏ပရိုဖိုင်း၏မြှင့်တင်ရေး, ကောင်းသောင်ငွေရဲ့ရှာဖွေရေး options များထဲမှာရှိသကဲ့သို့အချိန်အများကြီးဖြုန်းဖို့လိုအပ်သောကွောငျ့, သငျသညျ, စိတ်ရှည်ဖို့ရှိသည်လိမ့်မယ်။ ဆုတ်ခွာမပေးလျှင်မည်သည့်အမှုကိစ္စတွင်, သင်၏ကုန်ကျစရိတ်အပေါငျးတို့သနောက်ဆုံးမှာထပ်တလဲလဲ okupleny ဖြစ်လိမ့်မည်။